नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै शेयर बजार सकारात्मक, अब के होला?
काठमाडौं, साउन १ : नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै शेयर बजारले सकारात्मक प्रवृत्ति समातेको छ।
अन्तिम समयमा आएको खरिद चापले अन्तिम विन्दु र उच्च विन्दु एउटै जस्तै भएकाले बजार ‘इन्ट्राडे हाई’ मा बन्द भएको हो। योसँगै कारोबार रकम पनि वृद्धि भएको छ। बुधबार ४२ करोड ६७ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १५ दशमलव ८५ ले वृद्धि हुँदै १२७४ दशमलव ८६ को विन्दुमा पुगेको छ। दोस्रो बजार परिसूचकमा १ दशमलव २६ प्रतिशतकोे वृद्धि देखिएको छ। दोस्रो बजार १२५९ दशमलव ०१ को विन्दुमा खुलेको थियो भने १२७५ दशमलव ०२ को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो।
आज बजारको न्यून विन्दु १२५८ दशमलव ९१ थियो।
आज सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको ४ करोड ७५ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
आज उन्नति माइक्रोफाइनान्सका शेयरधनीले सर्वाधिक ७ प्रतिशतले कमाए भने सिभिल लघुवित्तका शेयरधनीले सर्वाधिक ९ प्रतिशतले गुमाए।
मूल्य समायोजन गतिविधि
शत प्रतिशत हकप्रद शेयर प्रयोजनार्थ ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ।
नबिल ब्यालेन्स्ड फन्ड २ का ११ करोड २० लाख इकाईहरु नेप्सेमा सूचीकृत भएका छन्।
अघिल्लो कारोबार दिनको निष्कर्ष अनुसार, हाल बजार सकारात्मक क्षेत्रमा रहेको र तत्कालीन प्रतिरोध १२६५ को क्षेत्रमा रहेको भनिएको थियो। आज बजारले यो प्रतिरोधलाई तोडेको छ र नेप्से परिसूचक १२७४ दशमलब ८६ अंकमा बन्द भएको छ।
चित्र नं १, नेप्सेको दैनिक मैनबत्ती प्रवृत्तिले बजार सकारात्मक हुँदै गएको संकेत गरेको छ। अन्तिम दिनको मैनबत्तीले बुलिस मारुबोजु आकृति बनाएको छ। यो आकृतिले अर्को कारोबार दिन पनि बजार सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ।
चित्र नं.२, विगत दुई दिनको कारोबार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई पाँच मिनेट समयावधिका मैनबत्तीको प्रवृत्तिलाई प्रयोग गरिएको छ। आज बजार प्रवृत्तिको उच्च विन्दु र तल्लो विन्दुहरु बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेकाले बजार सकारात्मक देखिएको छ।
बजारको प्रवृत्ति २१ र ५० समयावधिको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरुभन्दा माथि रहेको र यी ईएमएहरु फराकिलो हुँदै गएकाले बजारमा क्रेताको चाप बलियो रहेको संकेत गरेको छ। आज रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ८३ दशमलव १४ अंकमा रहेको छ। यसको प्रवृत्तिले कारोबारको अन्तिम समयमा शेयर बढी खरिद भएको संकेत गरेपनि बजार सच्चि हाल्ने संकेत भने गरेको देखिँदैन।
स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले पनि कारोबारको अन्तिम समयमा शेयर बढी खरिद भएको र बजार सच्चिन सक्ने प्रारम्भिक संकेत मात्र गरेको छ।
निष्कर्ष : माथि उल्लेखित छोटो समयका नेप्से प्रवृत्ति र सूचकका आधारमा आज पनि बजार सकारात्मक क्षेत्रमा रहेको र यदि बजार १२६८ भन्दा माथि स्थिर रहेमा अर्को तत्कालीन मुख्य प्रतिरोध १२९० देखि १३०० को क्षेत्रलाई सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै, यदि बजार १२६६ भन्दा तल स्थिर रहेमा बजार केही सच्चिन सक्ने देखिन्छ र अर्को तत्कालीन सामान्य टेवा १२५६ मा रहेको देखिन्छ।
Published Date: Wednesday, 17th July 17:23:47 PM
शेयर बजार आज पनि सुस्त, अब के होला?
बल्ल चम्कियो शेयरबजार, दाेहाेराे अंकले बढ्याे नेप्से